Mahaboboka Info. About. What's This?
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia patate douce. Ny isanomby dia 2450. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia mangahazo. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 80 ny mponina no miasa tany. 2 ny mponina no miasa aminny fanjonoana. 10 ny mponina no miasa aminny fiompiana. 8 ny mponina no miasa aminny sampandraharaha. 12500 no isanny kisoa.
Tongavanny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isanandro any. Ijanonny taksiborosy ilay kaominina. Andalovanny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana kolejy ao aminilay tanàna. Misy biraom-paositra ao.
2 isan-jatonny mponina no tena mahantra dia mahantra. 50 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 4 volana. 8 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 40 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isanny vono olona tanatinny taona 1999-2001 dia 4. Ao aminny atao hoe faritra mena ilay kaominina. Ny isanny vakitrano tanatinny taona 1999-2001 dia 12.